Haylamaaram Dassaalenyi aangoo gadi lakkisuudhaaf xalayaa galfate - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Haylamaaram Dassaalenyi aangoo gadi lakkisuudhaaf xalayaa galfate
Haylamaaram Dassaalenyi aangoo gadi lakkisuudhaaf xalayaa galfate
Haylamaaram Dassaalenyi, Muummeen Ministera Itoophiyaa, aangoo gadi lakkisuudhaaf xalayaa galfachuun isaa beekame. Haylamaaran Dassaalenyi aangoo Muummee Ministeraa fi barcumaa dura taa’aa ADWUI gadi ni dhiisa.
Haylamaaram booda eenyu muummee ministeraa akka ta’u ammatti ifaa miti. Garuu, yeroofis yoo ta’e, itti aanaa isaa, Dammaqaa Mokkonnin godhuudhaaf ADWUI’n ni carraaqxi ta’a. Kuni ammoo rakkoo biyyattiin keessa seente yoo hammeese malee dhibeef woggaa hedduuf fala waan argamsiisuu miti. Falli mootummaa ce’umsaa hunda ammatu dhaabuudha.
Qabsoon ummani Oromoo geggeessaa jiru mootumma biyyattii irratti dhiibbaa kana hin jedhamne uumaa jira. Dhiibbaan addatti Haylamaaram mudate, kan gara aangoo gadi lakkisuutti isa geesse, maal akka ta’e ifaa miti. Ta’us, rakkoon hamaan ADWUI’n keessa jiru, qoqqoodamiinsi jaarmayaa, kanaaf sababa guddaa ta’uun isaa ifa.
Wanti adeemaa jiru hundi kan argisiisu guduunfaan garee ADWUI wolitti hidhu bakka hundaan hiikkachuu isaati. Qabsoo eegalame cimsuun sirna saamichaa fi ukkamsaa gara boolaatti geessuun dirqama.
garee lammaa magarsaa
Previous articleHiriirri mormii fi lagannaan gabaa Oromiyaa keessatti bal’inaan geggeeffamaa jira
Next articleSirna ce’umsaa Afrikaa Kibbaa irraa maal baranna?